मनोरञ्जन Archives - Khulanews
अचेल सपनीमा पनि आउन छोड्यौ तिमी । सायद कसैको सपना बनेर बाचिरहेकी छौ कि ? वा कसैलाई सपना देखाएर ? थाहा थिएन, मलाई टाढा गएपछि सबै कुरा टाढिन्छन् भन्ने । तिम्रो मन यति कठोर होला भन्ने मैले सोचेको नै थिइनँ । तर के गर्नु अक्सर जिन्दगीमा नसोचेको भइदिन्छ । नचाहेको भइदिन्छ । चाहनु मेरो भुल
काठमाडौं – २९ असारबाट प्रदर्शनमा आउँने शोभित बस्नेत निर्देशित चलचित्र ‘बाबु कान्छा’को शिर्ष गीत सार्वजनिक गरिएको छ । प्रदर्शनको एकसाता अगाडि चलचित्र युनिटले शिर्ष गीत सार्वजनिक गरेको हो । चलचित्रको चर्चालाई थप उचाही दिन गीत रिलिज गरिएको निर्देशकको भनाई रहेको छ । गायक तथा संगीतकार शम्भुजित बास्कोटाको स्वर रहेको गीतमा टंक बुढाथोकीको शब्द तथा संगीत
मुम्बई– विश्वका सबैभन्दा सुन्दर महिलाको जानकारी लिने उत्सुकता जोकेहीमा पनि हुने गर्छ । ती महिला कहाँ छिन् ? कुन देशमा छिन् ? कस्ती होलिन् ? भन्ने सधैँ खोजको विषय रहेको छ । आज हामीले विश्वका १० सुन्दर महिला यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजेका छौँ । जसको रूप देखेर धेरैको होस उड्न सक्छ । सेलेना
काठमाडौं– पूर्व मिस नेपाल मलिना जोशीलाई चलचित्र क्षेत्र त्यति फापेको देखिँदैन । २०१४ मा निर्मित ‘ऋतु’बाट अभिनयमा डेब्यु गरेकी मलिनाले भर्खर प्रदर्शनमा आएको चलचित्र ‘तिमी हुन्छौ जहाँ जहाँ’सम्म आइपुग्दा जति पनि चलचित्र अभिनय गरिन्, ती सबै असफल सावित भए । पहिलो चलचित्र ‘ऋतु’बाट चर्चा बटुलेकी उनले दोस्रो चलचित्र ‘द विनर’बाट भने सफलता पाउने
वीरगन्ज –समयमा भुक्तानी पाउने आशामा बिक्री गरेको उखु क्रसिङ भएको पाँच महिना बित्न लाग्दा समेत भुक्तानी पाउन नसकेको किसानहरुले बताएका छन् । उखुलाई नगदे बाली भनिए पनि बारा पर्साका कृषकहरुले एक दशकयता उधारोमा उखु बिक्री गर्न बाध्य भएका छन् । लामो समयसम्म उखुको भुक्तानी नहुँदा समस्यामा परेको भन्दै उखुको बक्यौता रकम छिटो भन्दा छिटो उपलब्ध
घरजम गरेपछि अभिनयबाट आफूलाई टाढा राख्ने अभिनेत्रीको नाम लिनुपर्दा ऋचा सिंह ठकुरी पनि पर्दछिन् । दर्शकमा राम्रो क्रेज हुँदाहुँदै पनि विवाह गरेर एकाएक हराएकी ऋचा ‘यो पागल मन’ चलचित्रमार्फत अभिनयमा कमब्याक गर्दैछिन् । असार २९ बाट प्रदर्शनमा आउने यो चलचित्रमा उनको भूमिका अभिनेता विनोद न्यौपानेको अपोजिट रहेको छ । कल्याण अधिकारीको निर्माण, निर्देशन रहेको चलचित्रले